China e-Ground GL266 mveliso kunye nabenzi | Ukuzalwa
Indawo yemidiyizize yokugqibezela ngokugqibeleleyo kunye ne-CREE XPE ye-LED (6pcs i-LED) iphakheji kunye ne-10/40 yeedigri ezikhethiweyo. Iglasi enomsindo, ibanga laselwandle elingama-316 ulwakhiwo lweSimbi engenazingcingo elinganiswe kwi-IP68. Akukho zidibanisi zoomatshini kumthombo wokukhanya oqinisekisa ukhuseleko olomeleleyo ngokuchasene nokungena kwamanzi. Imveliso iqhuba iintlanganiso ezipholileyo zonke iimfuno zobushushu bokuchukumisa. I-Inline 350mA yomqhubi ongakhetha kuzo zibandakanya ukutshintshwa, ii-mains, i-1-10V kunye ne-DALI izisombululo ezinokunciphisa. Umbane we-6W nge-600 ekhanyayo. Ubungakanani bemveliso ngu-96x47mm. Sebenzisa njengokukhanya kwangaphandle okanye ukukhanya okungangeni manzi. Imowudi yokuvela kombane rhoqo kunye nokuqhubeka kwesibane kwahlukile. Ukuhlala rhoqo kuvela ezantsi, kwaye umbane oqhubekayo uvela ecaleni. Ukongeza, sinokulawula i-RGB rhoqo yangoku ukwenza ukuba iprojekthi ibonakale ngakumbi. Iqokobhe lamkela ukuchaneka konke-okungaphandle komzimba kwesibane somzimba, ipaneli yeglasi yokhuseleko kunye netywina lokutywinwa kwerabha, ukuzimela okuzimeleyo okunemigangatho emininzi eyomeleza iglasi, ukungangeni manzi, ukungabi nalo uthuli, ukulwa nokuvuza kunye nokulwa nokubola. Izibane ezingcwatyiweyo zilungele kakhulu ingca, iindawo eziluhlaza, iimpawu zamanzi, amanyathelo kunye neendlela zokupaka.
Ukunikezwa amandla 350mA okanye 24VDC
Izicelo Ngaphakathi / Ngaphandle
GL266 PHANTSI UKUKHANYA
GL266 CREE I-CW, WW, NW, Luhlaza oBomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, Amber S10 / F40 Okwangoku I-350mA Uthotho 3M 2X0.75mm² Intambo 6W I-600LM D96X47 N / A
I-GL266D CREE I-CW, WW, NW, Luhlaza oBomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, Amber S10 / F40 Umbane oqhubekayo 24VDC Iyafana 3M 2X0.75mm² Intambo 6.5W I-600LM D96X47 N / A
I-GL266RGB CREE I-RGB (2R + 2G + 2B) S10 / F40 Okwangoku I-350mA Uthotho 2x3M 4X0.5mm² Intambo 6W N / A D96X47 N / A
Egqithileyo Isibane eseludongeni ML103
Okulandelayo: Isibane eseludongeni ML102-L